N'ụbọchị izu ike nke furu efu nye onye Jentaịl - Rabbi Michael Avraham
N’ụbọchị izu ike ka ndị Jentaịlụ furu efu
Nzaghachi > Atiri: Ọmụmụ Talmudic > N’ụbọchị izu ike ka ndị Jentaịlụ furu efu
Isaac Ajụrụ ya afọ 6 gara aga
1) Torah chụpụrụ anyị na Sabbath furu efu gaa na ndị Jentaịl…
Nke a metụtara ihe ndị ikpeazụ (Hazo'a na ndị ọzọ) kwusiri ike na iwu asaa nke ọbụna ndị na-abụghị ndị Juu bụ ihe dị mkpa n'akụkụ 'eziokwu na omume'.
Ma lee anya n’okwu Maimonides gbasara mwepu nke ehi Israel nke tiri ehi nke ndị Jentaịlụ, nke n’iwu ha na-achọghị ya… Anyị adịghị emeso ha karịa ha onwe ha…
Gemara nke dị na Sanhedrin na-ekwu na a machibidoro iwu ịlọghachite onye mba ọzọ mfu… Rashi kọwara na ọ na-ekpughe na ọ naghị alaghachi n'ihi iwu ịlaghachi, n'ọnọdụ ọ bụla enwere mmachibido iwu (ọ gwụla ma emere ya ọzọ n'ihi mmeru Chineke ma ọ bụ n'ihi ido aha nsọ)…
Ajuju m bu na iwu ndia enwere ike igbanwe dika mgbanwe 'eziokwu na ezi omume' nke ndi mmadu nabatara? N'ọnọdụ ebe onye ọ bụla na-ahụ na ihe ziri ezi ime bụ ịkwụghachi ihe mfuru, iwu ọ ga-agbanwe? N'obodo ụfọdụ enwere ọbụna iwu (mgbe ahụ enwere ike ịdogide n'iwu Kim 'iwu', ma ọ bụrụ na onye mba ọzọ nwere ọrụ anyị agaghị adị obere na ha)…
Ọbụna ma ọ bụrụ na e kwuru na ọ dịghị ọrụ, ọ bụ 'naanị' omume nke na-abụghị Torah, ma ọ dịkarịa ala a gaghị enwe ọrụ (ọbụlagodi dị ka Rashi) ... The Torah bụghị iwu ma e nwere ihe mere ịlaghachi, na A nabatara omume ọma n'oge anyị… Ma ọ bụghị n'ihi mitzvah…
Ụfọdụ ndị rabaị na-ede na taa ọ dị mkpa ịlaghachi n'ihi ido nsọ nke aha ahụ… ma ọ dị m ka mwepu, ido aha ahụ nsọ abụghị iwu, na n'ụzọ doro anya, a ga-ahapụ naanị mgbe o bu n'obi ido aha ahụ nsọ…
2) Gịnị ka ịlaghachi 'n'ihi ido nsọ nke Gd' (dị ka e hotara na akụkọ nke ndị Jerusalem)... Ọ bụrụ na Torah ọ bụghị nanị na ọkụ ma machibido - ihe ọjọọ ga-eto ndị Izrel maka ihe na ha. bụ n'ezie a mmachibido iwu?
Michi Ndị ọrụ Zara afọ 6 gara aga
N'ezie, ekwenyere m na ajụjụ nke ido aha ahụ nsọ bụ ihe na-apụtaghị ìhè. N'uche nke m enwere oke ọrụ inyeghachi azụ taa, ka Hameiri na-ede. Ị na-ede na ọ na-eme otú ahụ n'akụkụ nke omume ọ bụghị n'akụkụ nke iwu, na m ga-ekwu banyere nke a n'uche nke m: Nke mbụ, n'ihi na taa, ọ bụ iwu na ọ bụghị omume, ebe ọ bụ na ọ bụ iwu na-alaghachi a. mfu nye onye mba ọzọ dị ka onye Juu na site n'otu amaokwu ahụ. Gemara dị na BK Lez na-ekwu n'ụzọ doro anya na ha kwere ego maka Israel nanị n'ihi na ha edebeghị XNUMX mitzvos ha. Nke abụọ, ọ bụrụgodị na ọ na-ewepụ gịnị bụ nsogbu na nke ahụ ?!
Na ihe ị jụrụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe mmachibido iwu ebe anyị chọpụtara na-ekwe ka mmachibido iwu megide mmetọ na ido aha aha, bụ onye na-enye ya. Nke a abụghị ihe mmachi ma ọ bụ nzaghachi nye ọnọdụ ndị Jentaịlụ n'oge ahụ, yabụ ọbụlagodi n'oge ha enwere ohere inyeghachi maka ido aha ahụ nsọ. Nke a bụ ihe na-egosi na nke a abụghị mmachibido iwu.
Lee maka nke a n'akwụkwọ akụkọ m gbasara ndị Jentaịlụ n'oge anyị ebe a:
Na na àgwà n'ebe ndị mba ọzọ na mgbanwe na halakhah ebe a.
Dabere na Hameiri o doro anya na a ga-eweghachi ya…
A na m arịọ dị ka ndị na-ekpe ikpe na-agbasoghị usoro ya si dị, na iwu nke ndị Jentaịl n'oge anyị ekwesịghị iji ya tụnyere iwu nke onye bi ...
Gemara na poskim na-ekwu n'ụzọ doro anya na ewezuga nhapụ nke Torah enwere mmachibido iwu n'okwu ahụ (na-ekwu na ọ si Durban), na ọbụna mesoo echiche ya.
Dị ka Rashi si kwuo, isi ihe bụ igosi na anyị na-azaghachi n'ihi ebubo ahụ ọ bụghị ihe ọzọ.
Ma onye na-eme n'aha nke omume - ostensibly na-eme kpọmkwem ihe ndị amamihe chọrọ igbochi, chọpụtara na ọ na-eme ihe ọ bụghị n'ihi eluigwe.
Nke mbụ, ọ dịghị mkpa maka usoro Rashi. O kwere omume na mmachibido iwu bụ ime n'ihi iwu nke mba ma ọ bụ ịchọta ihu ọma n'anya ha. Ma ime maka ezi omume yiri ime maka ido nsọ nke Gd. A na-amanyekwa anyị omume ọma site na Torah (ị mewokwa ihe ọma na ihe ọma).
Otú ọ dị, ọ bụrụgodị na ị ziri ezi na e nwere ihe mgbochi megide ime otú ahụ n'ihi omume ọma, aghọtaghị m otú ị na-atụ aro ka a gbanwee nke a. Nke mbụ, ọ bụrụ na omume taa pụtara ịzaghachi ọzọ ị na-eme n'ihi omume ọma na nke ahụ bụ ihe a machibidoro iwu. Nke abuo, n'ịdị mfe ha, ọbụna n'oge ha, ọ bụ ụkpụrụ omume, ebe ọ bụ na n'echiche gị, a machibidoro ya ịzaghachi omume ọma.
Mana ihe a niile bụ ihe dị egwu. Ebe ọ bụ na olee mgbe a machibidoro iwu ime ihe megidere omume naanị iji gosi na mmadụ na-eme ihe megidere iwu? Ihe ndị a na-agbagwoju anya.
Ajụjụ a bụ ma ụkpụrụ omume nwere ike ịgbanwe…
The Torah machibidoro naanị igbu ọchụ na ịpụnara mmadụ ihe n'aka ndị mba ọzọ n'ihi na a na-ewere ya dị ka ezi omume na omume, na dị ka ndị mba ọzọ n'onwe ha na-etinye naanị n'eziokwu na omume, otú ahụ ka anyị na-etinye aka na ha. ' na anyị na-agba mbọ naanị n'etiti anyị (na dị ka Rashi ọbụna machibidoro ndị ọzọ, ka ọ ghara ikpughe)
Aghọtaghị m ihe mkparịta ụka ahụ gbasara. Akọwala m ya. Ụkpụrụ omume pụrụ n'ezie ịgbanwe. Ma ọ bụrụ na n'echiche gị Rashi machibidoro ime ihe n'ihi omume (nke doro anya na-ezighị ezi n'uche nke m) mgbe ahụ ọ gaghị agbanwe iwu. A ga-enwe ọrụ omume na mmachibido iwu halak.